Dr. Dufle oo Warbixin ka soo saaray qatarta uu leeyahay Cudurga Cagaarshowga
Iyadoo maanta oo taariikhdu ku beegan tahay 28-ka July maalinta Hey’adda caafimaadka Aduunka ee WHO u aqoonsatay maalinta loo asteeyey ka hortaga cudurka Cagaarshowga ayaa dhaqaatiirta Soomaaliyeed waxay uga digayaan bulshada qatarta uu cudurkaas leeyahay iyo saameynta caafimaadka uu qofka ku yeesho.
Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo ka mid ah dhaqaatiirta Soomaaliyeed oo shir jaraaid ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in cudurkan cagaarshowga uu yahay cudur qatar ah oo caalamku u aqoonsaday dilaaga aamusan.
“Cudurka Cagaarshowga ama jooniska waa cudur dhibaato weyn ku haya bulshada caalamka ku dhaqan, sidaas darteed sanad kasta 28 July waxaa loo asteeyay maalinta cagaarshowga aduunka (World Hepatitis Day) si bulshada caalamka loogu wacyi galiyo qatarta iyo ka hortaga cudurkaan helista ah oo sida amusan dadka u dila (Silent Killer)” ayuu yiri Dr Dufle.
Dr. Dufle ayaa sheegay in Cudurka cagaarshowga inay keenaan feyrusyo kala duwan kuwaasoo keeno burbur iyo dhaawac ku dhaca unugyada beerka (Hepatitis), feyrusyadaasoo oo uu sheegay iney ka mid yihiin Virus A, B, C oo ah kuwa ugu badan iyo D, E.
Cagaarshowga A ( Hepatitis A Virus – HAV) ayuu intaa ku daray inuu yahay nooca ugu badan, uuna sanadkii ku dhaco tiro dhan 1.4 milyan, isagoo xusay inuu ku badan yahay caruurta iyo dadka waaweyn, isagoo tilmaamay in cudurkan uu mararka qaarkood dadka ugu dhaco hab hab saf mareen ah (Outbreak).
“Wuxuu ku badan yahay Cagaarshowgu goobaha nadaafadoodu hooseyso dad badan ay ku nooloyihiin (Crowded area) sida xeryaha qaxootiga IWM, Feyruska wuxuu soo raacaa saxarada, waxaana gudbiya gacmaha ka dib marka la cuno cunto, khudrad, miro oo aan si fiican loo nadiifin iyo marka la cabo biyo aan nadiif aheyn oo jeermiga ku jiro” ayuu intaa ku daray.
Dr. Cismaan Maxamuud Dufle ayaa intaa ku daray in cagaarshowga A (HAV) marka qofka dhiigiiso galo ilaa calaamooyinka ka soo if baxayaan ay qaadaneyso muddo dhan qiyaastii 30 maalmood, xiligaasoo uu tilmaamay in qofka saxarada ku gudbin kafro cudurkii ama feyruskii.
“Noocan A dhaqso ayaa looga bogsadaa, wax raagis ahna ma yeesho (Chronic Form)” ayuu intaa ku daray Dr. Dufle.
Waxaa uu sheegay in si dadka looga wacyigeliyo qatarka cudurkan loo baahan yahay in dadku ay fahmaan waxaa keena cudurka, calaamadaha lagu garto, iyo sida looga daweeyo dadka, wuxuuna yiri isagoo arimahaas sharaxaya:-
Cagaarshowga B (Hepatitis B Virus – HBV) Cagaarshowga noocaan waxaa keena feyrus B ( HBV), wuxuuna ka mid yahay kuwa ugu qatarsan. Cudurkan waxa uu keenaa in qofka uu ku noqodo mid wakhti kooban haya (Acute) ama joogta ah ( Chronic). Qiyaastii waxaa cudurkaan qaba aduunyada ama soo marey tiro dhan 2 bilyan oo qof,waxaa cudurkan la nool ama qabta 350 milyan ( Chronic Infection) waxaa sanadkii u dhimata tiro ku dhow hal milyan.
6- Wuxu kaloo ku gudbaa daawo dhaqameedka sida:-
Waxaa keena feyruska cagaarshowga C (HCV), tirade aduunka qabta cagaarshowga nooca C-ga waa 170 ilaa 200 milyan qof ; sanad kaste tirade bukaanka cusub uu ku dhaco waxey gaareysaa 3 – 4 milyan.
Wuxuu ku gudbaa dhiiga iyo dheecaanka qofka jiran marka uu gaaro qofka fiyow. Marku feyruska dhiiga galo ilaa iyo calaamooyinka ka soo ifbaxayaan waxey qaadaneysaa muddo dhan qiyaas ahaan 60 maalmood (45 -180 maalmood).
Qeybta Hore : Waa xiliga cagaarkii wali soo if bixin (Pre-icteric Phase): Xiligaas bukaanka waxuu qabaa calaamooyinka sida labolabo , bog xanuun, madax xanuun, matag , cuntada uu qaadan kari waayo , daal badan, xumad, qun xanuun , murqo xanuun , xubno xanuun, shuban yar. Calaamooyinkas waxay ay jiri karaan muddo dhan 10 ilaa 14 casho.
Arintaas si cilmi ah hadaan u fasirno, waa tii horay aan u soo xusney sadaxdii qeybood ee calaamooyinka gaar ahaan xiliga cagaarka indhaha iyo oogada ay soo if baxo in uu jiri karo 2,3 ilaa 4 usbuuc kadibna ay baabi doonaan calaamooyinkaas oo dhan, hadabo waxaa isku soo beegmaya xiliga bukaanka la gubo iyo dhamaadka caadiga ahaa ee calaamooyinka taas ayaana keentay in dadka qaarkiis u qaataan in bukaanka uu dabka ku reestey , taasana waxey keeneysaa in bukaanku.
Dib u bilaabo socod iyo dhaqaaqiisi nolol maalmeed midaas oo sii xumeyn doonto xaalada caafimaad ee beerka ayadoo bilooyin kadib (6 bilood) uu cudurkii u gubaayo nooca raagiska yeesha (Chronic Hepatitis).
Cawaaqibta Dambe ee Cudurka Cagaarshowga.
Ugu horeyn waa in la xoogiyaa nadaafada gacmaha cuntada ka hor iyo markii musqusha lagalo, waa in la xoojiyaa nadaafada guriga iyo musqusha, waan in si fiican loo mayraa qudaarta, waa in lailaaliyaa nadaafada raashiinka lacuno.
Waxaa kaloo muhiim ah cirbadaha leesku duro,sakiinta garxiirka iyo cadayga ilkaha in aan wadar loo isticmaalin, laguna tuurin dibadda. Sidoo kale waxaa muhiim ah qalabka loo isticmaalo ilka bixinta dalqa gooynta qungooynta gudniinka
Wiilasha dhaga durista uu nadiif yahay lana jeermi dilo taaso laga helo xarumaha caafimaadka. Lamaanaha isguursanaya waa in ay iska baaraan feyruska cagaarshowga nooca B.
Talo-siinta qofka qaba cudurka cagaarshowga.
Raashinka: Qofku haduu afka wax ka qaadan karo waa in uu badsadaa qaadashada cuntada macaan ama malabka shinnida si uu helo tamar badan
(Energy). Dabcan arrimahaas aan soo sheegnay waa ka reebban yihiin qofka kaadi-macaanka qaba.
Ugu dambeyntii waxaan ku soo gunaadadayaa in bulashadeena soomaaliyeed ay xoojiyaan ka hortagga cudurrada faafa iyagoo kordhinaaya wacyigooda caafimaad si loo helo bulsho caafimaad qabta. Waxaana hubaal ah in ka hortagga cudurrada ay ka wanaagsan yahay daweynta.